न्याय माग्दा पक्राउ, निर्मलाको पोस्टर यसरी टासिदै छ शहर भरि, प्रहरिले गर्‍यो दमन – News Mala
November 30, 2018 Debraj Kandel समाज/बिबिध 0
काठमाडौ :- निर्मला पन्तको न्यायका लागि अनेक कार्यहरु भएका छन तर सरकार बहिरो झै बनी बसेको छ तमासा हेरेको छ। नया युग भन्दै करोडौं खर्चेर प्रतिपक्षीलाई सरकार त देखायो सरकारले तर न्याय माग्दै हिड्नेहरुलाइ भने सरकार उत्तानो परेर सुसु गरेको होकि भन्ने जस्तै पारिएको छ वा के हो सरकारले नै जानोस।
काठमाडौको मइतिदेवीमा निर्मलाको न्यायका लागि पोस्टर टाँस्ने क्रममा प्रहरिले एक युवालाइ पक्रेर भ्यानमा हालेको छ। सोही अबस्थामा भावना राउतले फेसबूकमा आइ लाइभ गर्नु भएको रहेछ। न्यायका लागि लड्ने जो सुकै किन नहोस त्यसलाइ हामिले साथ दिनु पर्छ समर्थन गर्नै पर्छ ! जानी जानी हत्यारा लुकाउने काम गरिएको छ भने न्यायका लागि लड्नुपर्छ।
हत्याराको सबै प्रमाण नस्ट गरिएको भनी घटनालाइ तोडमोड बनाउने काम भइरहेलो छ। तर न्यायका लागि न्याय माग्ने माथि प्रशासनले यस्तो हर्कत सायद गर्ने हुन्थेन कि? हेरौ तलको भिडीयो के छ खास?